तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड एक
बायनोमिनल वितरण सहित नमूनाको सम्भाव्यता फर्काउँदछ ।
परीक्षा स्वतन्त्र परीक्षाहरूको सङ्ख्या हो ।
SP हरेक परीक्षाको सफलताको सम्भाव्यता हो ।
T_1 परीक्षणहरूको सङ्ख्याका लागि तल्लो सीमा परिभाषित गर्दछ ।
T_2 (वैकल्पिक) परीक्षणहरूको सङ्ख्याका लागि माथिल्लो सीमा परिभाषित गर्दछ ।
डाएसको दश वटा थ्रोहरू बन्ने संभावना कति हुन्छ, जसमा छैंटौं दुई निश्चित आउनु पर्ने छ ? छैटौं (वा अरू कुनैसङ्ख्या)को सम्भाव्यता १/६ हुन्छ । तल दिएका सूत्रले ती तत्वहरूलाई संयोजन गर्दछन्:
=B(10; 1/6; 2) ले २९% को सम्भाव्यता फर्काउँदछ।
संचिति बेटा सम्भाव्यता घनत्व प्रकार्यको उल्टो फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या प्रकार्य मूल्यांकन गर्ने सुरु र अन्त्य बीचको मान हो ।
अल्फा वितरण सम्मको परामिति हो ।
बिटा वितरणमा परामिति हो ।
सुरु (वैकल्पिक) सङ्ख्या का लागि तल्लो सीमा हो ।
अन्त्य (वैकल्पिक) सङ्ख्या का लागि माथिल्लो सीमा हो ।
बेटा प्रकार्य फर्काउँदछ।
=BETA.DIST(2;8;10;1;1;3)ले मान ०.६८५४७०६ फर्काउँछ।
=BETA.DIST(2;8;10;0;1;3)ले मान १.४८३७६४६ फर्काउँदछ
=BETAINV(0.5; 5; 10)ले मान ०.३३ फर्काउँदछ।
संचिति बेटा सम्भाव्यता घनत्व प्रकार्यको उल्टो फर्काउँदछ।
=BETA.INV(0.5;5;10) ले मान ०.३२५७५११५५३ फर्काउँदछ।
परीक्षणहरू परीक्षणहरूको जम्मा सङ्ख्या हो ।
व्यक्तिगत टर्म बाइनोमियल वितरण सम्भाव्यता फर्काउँदछ ।
X परिक्षहरूको सेटमा सफलताहरूको सङ्ख्या हो ।
C = ० ले एकल घटनाको सम्भाव्यता गणना गर्दछ र C = १ ले संचिति सम्भाव्यता गणना गर्दछ ।
=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 0) ले (यदि A1मा मानहरू ० बाट १२ प्रविष्टि गरेको खण्डमा) सिक्काको १२ फ्लिपहरूका लागि सम्भाव्यता देखाउँदछ जसमा A1मा प्रविष्टि गरेको पटकहरूको निश्चित सङ्ख्या हेडहरू आउने छन्।
=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 1) उही श्रृङ्खलाका लागि संचिति सम्भाव्यताहरू देखाउँदछ । उदाहरणका लागि, A1 = ४, श्रृङ्खलाका लागि संचिति सम्भाव्यता ०,१,२,३ वा ४ पटक हेडहरू (अ-संलग्न OR) हो।
ले व्यक्तिगत टर्म बाइनोमियल वितरण सम्भाव्यता फर्काउँदछ ।
=BINOM.DIST(A1; 12; 0.5; 0) ले (यदि A1मा मानहरू ० बाट १२ प्रविष्टि गरेको खण्डमा) सिक्काको १२ फ्लिपहरूका लागि सम्भाव्यता देखाउँदछ जसमा A1मा प्रविष्टि गरेको पटकहरूको निश्चित सङ्ख्या हेडहरू आउने छन्।
=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 1) उही श्रृङ्खलाका लागि संचिति सम्भाव्यताहरू देखाउँदछ। उदाहरणका लागि, A1 = ४, श्रृङ्खलाका लागि संचिति सम्भाव्यता ०,१,२,३ वा ४ पटक हेडहरू (अ-संलग्न OR) हो।
आत्मनिर्भरताका लागि चाई-स्क्वायर्डमा आधारित परीक्षण दुई परीक्षण श्रृङ्खलाको रेन्डम वितरण मार्फत डेभियन्सको संम्भाव्यता फर्काउँदछ। CHITEST डेटाको चाई-स्क्वायर्ड वितरण फर्काउँदछ।
CHITESTद्वारा निर्धारित सम्भाव्यताले CHIDISTपनि निर्धारण गर्न सक्ने छ, जुन केसमा अनियमित नमूनाको ची वर्गले त्यसपछि डेटा पङ्क्तिको सट्टामा परामितिको रूपमा पास गर्न जरुरी हुने छ ।
Data_Bसुपरिवेक्षणको एरे हो ।
Data_E अपेक्षित मानहरूको दायरा हो ।
=CHISQ.TEST(A1:A6;B1:B6) बराबर ०.०२०९७०८०२९ हुन्छ। यो सम्भाव्यता हो जसले काल्पनिक ची-वर्ग वितरणको मूल्यांङ्कित डेटाहरूसँग सन्तुष्ट गर्दछ।
तोकेको ची वर्गबाट सम्भाव्यता मान फर्काउँदछ । CHIDIST ले अनियमित नमूनाका लागि दिनु पर्ने ची वर्ग मान तुलाना गर्दछ त्यो (तुलना गरेको मान-अपेक्षित मान )^२/अपेक्षित मान काल्पनिक चाई स्क्वायर्ड सहित को सबै मानहरूका लागि गणना गर्दछ र परिकल्पनाहरूको लगि परीक्षण गर्न त्रुटिहरूको यो सम्भाव्यताबाट निर्धारण गर्दछ ।
CHIDISTद्वारा निर्धारण गरिएको सम्भाव्यता CHITESTद्वारा पनि निर्धारण गर्न गरिन्छ ।
CHIDIST (सङ्ख्या; degrees_freedom)
सङ्ख्या त्रुटि सम्भाव्याता निर्धारण गर्नलाई प्रयोग गरिएको अनियमित नमूनाको ची-वर्ग मान हो ।
Degrees_freedom परीक्षण स्वतन्त्रताको डिग्रीहरू हुन् ।
=CHIDIST(13.27; 5) ०.०२ सित बराबर हुन्छ।
यदि अनियमित नमूनाको ची वर्ग मान १३.२७ हो र परीक्षणसँग स्वतन्त्रताको ५ डिग्रीहरू भएको खण्डमा त्यसपका परिकल्पनाहरू २ % को त्रुटि सम्भाव्यता सहित आश्वासन गरिन्छ ।
TDIST(सङ्ख्या; Degrees_freedom; मोड)
तोकेको ची वर्गबाट सम्भाव्यता मान फर्काउँदछ। CHISQ.DIST.RT ले अनियमित नमूनाका लागि दिनु पर्ने ची वर्ग मान तुलाना गर्दछ त्यो (तुलना गरेको मान-अपेक्षित मान )^२/अपेक्षित मान काल्पनिक चाई स्क्वायर्ड सहित को सबै मानहरूका लागि गणना गर्दछ र परिकल्पनाहरूको लगि परीक्षण गर्न त्रुटिहरूको यो सम्भाव्यताबाट निर्धारण गर्दछ।
=CHISQ.DIST.RT(13.27; 5)०.०२०९७५७६९४ सित बराबर हुन्छ।
Degrees_freedom परीक्षण स्वतन्त्रताको डिग्रीहरू हो ।
चाई-स्क्वायर्ड वितरणको एउटा-पछाडि को भाग आउने सम्भाव्यताको उल्टो फर्काउँदछ।
=CHISQ.INV(0,5;1)ले 0.4549364231 फर्काउँछ।
चाई-स्क्वायर्ड वितरणको एउटा-पछाडि को भाग आउने सम्भाव्यताको उल्टो फर्काउँदछ ।
सङ्ख्या त्रुटि सम्भाव्यताको मान हो ।
एउटा डाइस १०२० पटक उफारिन्छ । १ १९५ पटक, २ १५१ पटक,३ १४८ पटक, ४ १८९ पटक,५ १८३ पटक र ६ १५४ पटक आउँदछ (मूल्याङ्कन मानहरू) । डाइस निश्चित छ भन्ने अनुमानको परीक्षण गर्नु पर्दछ।
माथि दिएको सूत्रद्वारा अनियमित नमूनाको ची वर्ग वितरण निर्धारण गरिन्छ । त्यसकारण डाईमा दिएको सङ्ख्याका लागि न पटक फ्याँक्दा एन का लागि मान १/६ हुन्छ त्यसकारण १०२०/६=क १७० सूत्रले १३.२७ को ची वर्ग मान फर्काउँदछ ।
यदि (मूल्याङ्कित) ची वर्ग (सैद्धान्तिक) ची वर्ग CHIINVमा त्यो भन्दा बढी वा बराबर हुन्छ, सिद्धान्तको बीचमा डेभिएसन र परीक्षण पनि धेरै भएको खण्डमा यो अवधारणा बिर्सने छ । यदि मूल्याङ्कित ची वर्ग त्यो CHIINV भन्दा कम भएको खण्डमा त्रुटिको तोकिएको सम्भाव्यता सहित यो अवधारणा निश्चित हुन्छ ।
=CHIINV(0.05;5)ले 11.07 फर्काउँछ।
=CHIINV(0.02;5)ले 13.39 फर्काउँछ।
यदि गल्तीको सम्भाव्यता ५% छ भने डाई सत्य हुँदैन । यदि गल्तीको सम्भाव्यता २% छ भने त्यहाँ यो स्थिर हुन्छ भन्ने बिश्वास गर्नलाई कुनै कारण छैन ।
=CHISQ.INV.RT(0.05;5)ले 11.0704976935 फर्काउँछ।
=CHISQ.INV.RT(0.02;5)ले 13.388222599 फर्काउँछ।
आत्मनिर्भरताका लागि चाई-स्क्वायर्डमा आधारित परीक्षण दुई परीक्षण श्रृङ्खलाको रेन्डम वितरण मार्फत डेभियन्सको संम्भाव्यता फर्काउँदछ । CHITEST डेटाको चाई-स्क्वायर्ड वितरण फर्काउँदछ.
=CHITEST(A1:A6; B1:B6) बराबर ०.०२ हुन्छ। यो सम्भाव्यता हो जसले काल्पनिक ची-वर्ग वितरणको मूल्यांङ्कित डेटाहरूसँग सन्तुष्ट गर्दछ।
तर्कहरूको सूचीमा भएका कति सङ्ख्याहरू गणना गर्दछ । पाठ प्रविष्टिहरू वास्ता गरिँदैन ।
प्रविष्टिहरू २, ४, ६ र आठ फाँटहरू मान १ - ४ मा गणना गर्नुपर्नेछ ।
=COUNT(2;4;6;"eight") = 3। त्यसकारण सङ्ख्याहरूको गणना ३ हो।
तर्कहरूको सूचीमा कति मानहरू छन् गणना गर्दछ । पाठ प्रविष्टिहरू पनि गणना गरिन्छ ताकि तिनीहरू शून्य लम्बाइको खाली स्ट्रिङमा समावेश किन नहुन् । यदि तर्कहरू एरे वा सन्दर्भ हुन् भने खाली कक्षहरू एरे वा सन्दर्भ भित्र ख्याल गरिँदैन ।
=COUNTA(2;4;6;"eight") = 4। त्यसकारण मानहरूको गणना ४ हो।
खाली कक्षहरूको सङ्ख्या फर्काउँदछ।
ॐदायराकक्ष दायरा हो जसले खाली कक्षहरू गणन गर्दछ ।
यदि कक्षहरू A1, A2, B1, र B2 सबै खाली छन् भने = COUNTBLANK(A1:B2) ले ४ फर्काउँछ।
तत्वहरूको सङ्ख्या फर्काउँदछ जसले कक्षदायरा भित्र रहेर निश्चित मापदण्डमामा भेट्छ ।
A1: A10 एक सेल दायरा हो जसमा नम्बर 2000 to 2009हुन्छ। सेल बी 1 नम्बर 2006मा समावेश छ। कक्ष B2 मा, तपाईं एक सूत्र प्रविष्ट गर्नुहोस्:
ऋणात्मक सङ्ख्याहरू मात्र जोड्न: =COUNTIF(A1:A10;"<0")
एक्सपोनेन्शल वितरण फर्काउँदछ ।
EXPONDIST(सङ्ख्या; ल्याम्ब्डा; C)
सङ्ख्या प्रकार्यको मान हो ।
ल्याम्ब्डापरामिति मान हो ।
C युक्तिसङ्गत मान हो जसले प्रकार्यको फारम निर्धारण गर्दछ ।C =0प्रकार्यको घनत्व निर्धारण गर्दछ रC = 1 वितरणहरू निर्धारण गर्दछ ।
=EXPONDIST(3; 0.5; 1)ले ०.७८ फर्काउँदछ ।
एक्सपोनेन्सियल वितरण फर्काउँछ।
=EXPONDIST(3; 0.5; 1)ले ०.७७६८६९८३९९ फर्काउँदछ ।
बिन्दु गणना गर्दछ जसमा थाहा भएको x-मानहरू र y-मानहरू प्रयोग गरेर रेखाले y-मानहरू काट्ने छ ।
Data_Y मूल्याङ्कन र मितिको सेटमा निर्भर हुन्छ ।
Data_X मूल्याङ्कन र मितिको सेटमा निर्भर हुन्छ ।
नामहरू, एरेहरू वा सन्दर्भहरू समावेश सङ्ख्याहरू यहाँ प्रयोग गरिन्छ । सङ्ख्याहरू सीधै प्रविष्टि गर्न पनि सकिन्छ ।
कटान गणना गर्नलाई उदाहरण स्प्रेडसिटबाट मानको रूपाम D3:D9 कक्षहरू प्रयोग गर्नुहोस् र xमानको रूपमा C3:C9 कक्षहरू प्रयोग गर्नुहोस् । आगत तल दिइने छ::
दिएको मानहरूमा आधारित पियर्सन कोरिलेसन कोफिसेन्ट को वर्ग फर्काउँदछ । RSQ (निर्धारण गुणांक पनि जनाउँदछ) निर्णय शुद्धताका लागि मापन हो र रिग्रेसन विश्लेषण उत्पादन गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Data_Y एरे वा डेटा बिन्दुहरूको दायरा हो ।
Data_X एरे वा डेटा बिन्दुहरूको दायरा हो ।
=RSQ(A1:A20; B1:B20) स्तम्भहरू A र B दुवैमा दुवै डेटा सेटहरूका लागि कोरिलेसन कोफिसेन्ट गणना गर्दछ।
Title is: तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड एक